Nolosha iyo Adventures of Mr. Sloto: Cutubka 8 ira Ma jirto abaalmarin lacageed ee bangiga
Lacag lagama helin Blog > Nolosha iyo Taabashooyinka Mr. Sloto: Cutubka 8
Waxaa soo raaca soo jeedin ay soo bandhigtey Ciyaartii Slott'Cash Player Priscilla Robles
(iyada oo loo marayowww.facebook.com/SlotoCash.Casino/)
Mashiinka wakhtigu wuxuu ku dhacayaa wali. Waxaa jira muusikada dibedda iyo nalalka midabka diiran. Victor Fluke wuxuu arkayaa dad badan oo ka baxsan daaqada mashiinka. "Waxay dhamaantood aad u faraxsan yihiin, waxaan qabaa inaan ammaan nahay" ayuu yiri. Mr Sloto iyo Victor waxay dareemaan jawi diiran oo leh mariachi heesaha asalka ah. Maadaama Mr. Sloto uu ku dhow yahay in uu ka baxo, Victor wuxuu ku baaqay "Daryeel leh, waxaa jira cagahaaga cagahaaga ... erm, wheels". Mr. Sloto si taxadar leh ayuu uga fogaadaa in uu ku sii socdo cirridka iyo labadaba maraya marxaladaha diirran.
Waxaa jira qoryo, tortillas, koofiyado waaweyn oo koofiyado ah iyo farxad sare oo ku wareegsan hareeraha. "Waxaan joognaa Mexico," ayuu yiri Victor. Waxay ku faraxsan yihiin inay arkaan noocan oo kale ah oo soo dhaweyn leh ka dib markii ay soo ifbaxeen dhawaanahan. Waxay go'aansadaan inay qaniinaan marka ay si lama filaan ah u maqlaan cod dheer oo ka soo baxa kuwa wada hadlaya. "Atención! Macho Camacho vs Taco Malo en 5 minutos ".
Mr. Sloto wuxuu u arkaa giraan ciriiri ah bartamaha hoolka wayn. "Waa ciyaar tartan dhulka hoostiisa ah, yoohoo!" Ayuu yiraahdo Mr. Sloto.
Marka ay soo galaan giraanta, cabsida sakhradda ah ayaa si khalad ah u riixaya Mr. Sloto oo wuxuu ku dhexjiraa dadka badan iyo giraanta. Garsooruhu wuxuu u muuqdaa mid wareersan. "Muxuu yahay niyaddaada?" Mr. Sloto, si buuxda doorkiisa cusub, jawaabo: "Sloto Roboto".
Garsooraha ayaa ku dhawaaqay inuu noqon doono kulan cusub oo u dhaxeeya Sloto Roboto iyo Taco Malo. Dadku way argagaxan yihiin oo waxay badalaan shuruudo badan. Saaxiibka cad waa Taco Malo.
Garaarkana waa la garaacaa, cayaaraha kubada cagta ayaa bilaabanaya. Taco Malo ayaa si toos ah u timaada Mr. Sloto. Victor wuxuu ku qeylinayaa in uu sii wadi doono. Mr. Sloto ayuu cagaha gawaarida ku dhex wareegay oo kaliya wareega iyo wareega wareegga isagoo la socda Taco Malo. Ka dib daqiiqadaha 5 Taco Malo waa la dhammeeyey. "Tani waa fursadaada, hoos u garaac" ayaa ku qeylinaya Victor.
Mr. Sloto wuxuu ka hadlaa dahab dahab ah wuxuuna ku dhuftay Taco Malo oo toosan madaxa. Dhaqso ayuu u dhacaa! Garsooraha ayaa ku dhawaaqay guuleystaha: "El ganador es Sloto Roboto".
Dadku way xanaaqsan yihiin sida ugu khasaaray shuruudahooda, waxayna bilaabeen inay ku doodaan in Mr Sloto uu khiyaameeyay. Si dhakhsa ah hoolalka oo dhan waxay ka soo hor jeedaan Mr. Sloto oo wuxuu bilaabaa inuu ordo - mar kale - noloshiisa!
"Si dhakhso ah mashiinka waqtiga", ayuu yidhi Victor. Labaduba waxay ku ordi karaan mishiinka isla markiiba waxay ku xiraan lambarrada cusub. Waqtigaan waxay 2018 si sax ah u dhigteen. "Wakhtiga aad dib ugu noqotaan xaadirka", ayuu yidhi Victor.
Mr. Sloto wuxuu ku nuuxnuuxsaday gargaarkiisa wuxuuna u maleynayaa: "Ma sugi karo mar kale jacaylkayga.
SI LAGU QAADO BARNAAMIJKA RAADINTAADA!
Tani waa sheeko dhexdhexaadin ah si aad uga qayb qaadato fikrad kasta ama soo jeedin cutubka xiga. Soo dir soojeedintaada[Email ilaaliyo]
Waxaan u mahadcelineynaa Priscilla Robles sidii ay u gudbin lahayd fikradeeda. Waxaa lagu abaalmariyay XINAXADA LACAG LA'AAN AH.
Haddii aan u isticmaalno soo jeedintaada cutubka ku xiga, waxaan soo bandhigi doonnaa magacaaga adiga oo ah wada-abuuraha isla markaasna ku siiya XIUMX BILAASHO BILAASH AH!
1 SI LAGU QAADO BARNAAMIJKA RAADINTAADA!
2 Tani waa sheeko dhexdhexaadin ah si aad uga qayb qaadato fikrad kasta ama soo jeedin cutubka xiga. Soo dir soojeedintaada[Email ilaaliyo]
3 Waxaan u mahadcelineynaa Priscilla Robles sidii ay u gudbin lahayd fikradeeda. Waxaa lagu abaalmariyay XINAXADA LACAG LA'AAN AH.
4 Haddii aan u isticmaalno soo jeedintaada cutubka ku xiga, waxaanu soo bandhigi doonnaa magacaaga asagoo wada-abuuraya waxaanan ku siin doonaa xitaa SPRINK BILAASH AH!
4.1 this wadaag:
4.2 Sidaan oo kale:
Kasiinooyinka Good Online
dareen wanaagsan waayo, god turub qolkii / nin aan saaxiibka ee ...
La xiriir muraayadda miiska macmacaanka ah ee ka soo jeeda qoob ka ciyaarista casino ee la soo dhaafay
Warkii Carabta ciyaarta Afyare free
Virtual RaceBook 3D Afyare
Bar Sushi ciyaarta Afyare Free